TPLF oo sheegtay inay sii daysay boqollaal askari | Berberanews.com
Home WARARKA TPLF oo sheegtay inay sii daysay boqollaal askari
Itoobiya-(Berberanews)-Siyaasiyiinta kooxda TPLF ee gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya ayaa sheegay inay sii daayeen in kabadan afar kun oo askari oo maxaabiis ahaan u haysteen.
Saraakiishan ayaa sheegay in ay qeyb ka ahaayeen taliska waqooyi ee ciidanka laakiin la xiray markii ciidamada Tigreega ay weerareen saldhig milatari oo federaal ah.
Galinkii hore ee Isniinta Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya wuxuu cadeeyay in militariga ay dagaalka ku guuleysteen balse siyaasiyiinta TPLF ayaa sheegay in ay dagaalamayaan.
Ka hor inta uusan dagaalku bilaaban militariga waxay saldhig ciidan ku lahaayeen waqooyiga Itoobiya kuwaasoo ka kala yimid gobolada kala duwan ee dalka.
Boqollaal qof ayaa ku dhintay kumannaan kalena way ku barakaceen dagaalka
Laakiin markii dagaalyahanada Tigreegu si lama filaan ah u weerareen saldhiga weyn ee dagaalka kiciyay, kumaan kun oo ka tirsanaaa milatariga oo aan Tigray ahayn ayaa isku arkay iney ku sugnaayeen goob cadaw. Waxaa xiray fallaagada TPLF haseyeeshe haatan waa lasii daayay.
Warbaahinta dowladda ee ku sugan caasimadda Addis Ababa ayaa xaqiijisay in la sii daayay ugu yaraan saddex kun oo askari.
Waxay soo werisay in qaar ka mid ahi yihiin ciidamada Tigreega oo diidey iney dagaalamaan, waana warbixin ay u badan tahay in kooxda TPLF ay gaashaanka u daruurto.
Dhanka kale Gudiga Xuquuqul Insaanka ee Itoobiya wuxuu sheegay inuu aad uga walaacsanyahay kiisaska ah in dadka Tigreega ah si gaar loo waxyeeleeyo dagaalka awgii. (Waxay sidoo kale ku boorisay dowladda inay dib u soo celiso xiriirkii isgaarsiinta ee gobolka).
Dhanka kale Maamulka TPLF ayaa sheegay inay dib u qabsadeen magaalada labaad ee ugu weyn gobolka ee Axum isla markaana ay soo rideen diyaarad dagaal oo ay leeyihiin ciidamada Itoobiya.
Dhanka kale, hoggaamiyaha TPLF Debretsion Gebremichael ayaa sheegay in ciidamadiisa ay dagaal kula jiraan militeriga Itoobiya meel u dhaw caasimadda Mekelle halkaas labo maalin ka hor ay la wareegeen ciidamada dowladda.
Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed wuxuu baarlamaanka u sheegay in hal qof oo rayid ah aan lagu dilin howlgalka militeri ee bisha ku dhawaadka ah ka socda Tigray, waxaana hadalkaas si weyn uga hor yimid madaxda Tigray.
Qaramada Midoobay ayaa ka digtay in laga yaabo in dembiyo dagaal ay dhacaan gulufka ciidamada Itoobiya ay ku weeraraayaan Mekelle.
Dowladda Itoobiya ayaa Khamiistii sheegtay in la furi doono qaab ay hay`adaha gargaarka ku tagaan gobolka taas oo ay kor ka eegeyso dowladda, iyadoo intaas ku dartay inay ka go`an tahay la shaqeynta hay`adaha QM.
TPLF oo sii daysay boqollaal askari
Previous articleHargeysa: dhagaxdhigga Taallada Taariikhda Qaranka
Next articleBooliska Somaliland oo ka hadlay cidda dishay haweenay ajaanib ah